फोटो हेर्न राखेको श्रीमानको पासपोर्टले गायत्रीको जीवनमै दिलायो यस्तो खुशी! हेर्नुहाेस् – List Khabar
Home / जीवनशैली / फोटो हेर्न राखेको श्रीमानको पासपोर्टले गायत्रीको जीवनमै दिलायो यस्तो खुशी! हेर्नुहाेस्
admin January 13, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 211 Views
कमाएर खुशी दिन्छु भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना श्रीमानको दुर्घटनामा परेर ज्यान गएपछि रामेछापकी गायत्री शाहीलाई भरिभराउ लाग्ने आँगन रित्तो लाग्छ । खेतबारीमा काम गर्दागर्दै गायत्री शाही र सञ्जिव शाहीको आँखा जुध्यो । गायत्री १० कक्षामा पढ्दै थिइन् भने सञ्जिवले छ कक्षा पढ्दापढ्दै स्कुल छाडेका थिए ।
दुवैले एकअर्कालाई मन पराउन थाले । यो कुरा सञ्जिवको परिवारले थाहा पायो । सँगै जिउने मर्ने कसम खाइसकेका थिए दुवैले । तर सञ्जिवको परिवारले गायत्रीलाई रुचाएनन् । छोराले कतै गायत्रीसँगै पो बिहे गरिहाल्छ कि भनेर पल्लो गाउँको युवतीसँग सञ्जिवको बिहे गरिदिने कुरा चल्न थाल्यो ।
तर सञ्जिवले आफ्नो मनले खाएको मान्छेलाई छाडेर अर्कैसँग बिहे गर्न चाहेनन् । जसरी भए पनि गायत्रीसँगै बिहे गर्ने भन्ने अठोट गरे । गायत्रीलाई पनि सञ्जिवको साथबाहेक अरु केही चाहिएको थिएन । घरका मान्छेलाई छलेर दुवैजना एकदिन भागे र मन्दिरमा गएर बिहे गरे। २०६९ सालमा दुवैले आफ्नो प्रेमलाई विवाहको रुप दिए ।
त्यतिबेला सञ्जिव १८ वर्ष र गायत्री १९ वर्षकी थिइन् । ‘उहाँको परिवारले उमेर मिलेन भनेर मलाई नरुचाएको हुनसक्छ’ गायत्री भन्नुहुन्छ, ‘एक वर्ष जेठी भए पनि माया त चोखो थियो नि, माया गर्न नि उमेरले फरक पार्छ र ?’ माया गर्न उमेरले फरक त पारेन, तर समयले भने एकअर्कालाई साथमै रहन दिएन ।
बाध्यताले विदेश बिहे गरेको एक वर्षमै छोरी जन्मिइन्, सञ्जिना । विस्तारै जिम्मेवारीले थिच्न थाल्यो । न धेरै पढेको न हातमा केही सीप । कमाइको बाटो पहिल्याउन सञ्जिवले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । सुत्केरी श्रीमती र काखे छोरीलाई छाडेर सञ्जिव २०७१ सालमा मलेसियाको जहाज चढ्नु भयो ।
मलेसिया गएको केहि महिनामा नै शरीरमा तातो पानी पोखिएर सञ्जिव थला पर्नुभयो । हप्ता दिनपछि बिरामीले थलिएका सञ्जिवलाई त्यहाँको अस्पताल र कम्पनीले नेपाल पठायो । यहाँ अस्पतालले सञ्जिवको पोलेको घाउ क्यान्सरमा परिणत भैसकेको बतायो ।
क्यान्सरको उपचार गर्न २४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । उपचारको लागि भएको जग्गा पनि बेचिएको थियो । श्रीमान् गुमाउनुको पीडासँगै आर्थिक अवस्था कमजोर बनिसकेकाले कसरी गर्जो टार्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थाल्यो गायत्रीलाई । गायत्री र उहाँका परिवारलाई नेपालबाट आर्थिक सहायता पाइन्छ भन्ने केही जानकारी थिएन ।
‘नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा केही पनि थाहा थिएन हामीहरुलाई’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि एउटा संस्थाका मान्छेहरुले क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो ।’ नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका सञ्जिवको मृत्यु श्रम अवधि नसकिदै भएको थियो ।
Previous भर्खरै स्याङ्जामा घट्यो डरलाग्दो घटना दुई दिदि बहिनि माथि …….
Next यी ७ राशि हुँदैछन् फलिभूत हेर्नुहोस आजको राशिफल ..